Global Voices teny Malagasy » Antsafa nifanaovana tamin’i Sherwin Noorian, mpiara-manorina ny Farsi Tube · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Desambra 2018 7:16 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Hevitra, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Mozika, Politika, Tanora
(Marihina fa tamin'ny volana Martsa 2007 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Farsi Tube  na You Tube Iraniana izay natomboka tany Etazonia tamin'ny faran'ny taona (2006), dia nahasarika mpitsidika miisa 3.000 isan'andro, hoy ny mpiara-manorina azy, Sherwin Noorian. Amin'ny andavan'andro dia mety hitombo 7.000 ny isan'ny mpitsidika izay tonga hijery ny lahatsary farany indrindra alefan'ireo mpiteny Persiana ao amin'ny tranokala.
Ankoatra ny Farsi Tube, nanomana ny fanokafana ny seha-pifanakalozan-kevitra sy bilaogy ireo mpanorina mba hamoronana tambajotra sosialy fa tsy toerana fialamboly ho an'ireo mpiteny Farsi fotsiny ihany. Manolotra antsika ity antsafa manaraka ity i Noorian, iray tamin'ireo mpiara-manorina ny Farsi Tube:
F- Afaka mampahafantatra ny tenanao sy ny Farsitube (FT) ve ianao?
V- Izaho no Sherwin Noorian, mpianatra any Texas, Etazonia. Nanomboka ny FarsiTube.com ny tenako sy ireo namako roa. Vondrom-piarahamonina mifampizara lahatsary natao ho an'ny Iraniana, ary manana karazana lahatsary momba an'i Iran sy ny kolontsaina Iraniana ny FarsiTube . Manana lahatsarin-kira, lahatsary mampihomehy, lahatsary politika, lahatsary fialamboly, lahatsary maneso, sarimihetsika lava, sy ny maro hafa ny tranonkala. Afaka mandefa lahatsary ao amin'ny FarsiTube ny olon-drehetra, ary afaka maneho hevitra, mizara ary manamarika lahatsary .
F-Inona no lanjan'ny FT ho an'ny vondrom-piarahamonina Iraniana na tsy Iraniana?
V- Tsapanay fa mitondra lanjany lehibe ho an'ny vondrom-piarahamonina Iraniana ny FarsiTube. Io no toerana afaka handehanan'izy ireo sy hahitany mora ireo lahatsary an-jatony ary miroboka ao anatin'ny kolontsaina Iraniana. Ao anatin'ny fotoana iray ahitana ny fitomboan'ny elanelana misy eo amin'ny Iraniana mipetraka any Iran, sy ireo monina any Eorôpa na Amerika Avaratra misarika ireo Iraniana manerana izao tontolo izao ny FarsiTube. Mahatsapa fifandraisana amin'ny zava-mitranga ao Iran ara-politika izy ireo, na afaka miala voly fotsiny ihany koa. Azon'izy ireo jerena ihany koa ny lahatsary nataon'ireo mpisera FarsiTube ary mizara izany amin'ny namany. Manangana fitiavana vondrom-piarahamonina sy ny mari-panondroana azy ny tranonkala.
F-Moa ve mikasa ny hanangana seha-pifanakalozan-kevitra sy/na bilaogy ao amin'ny tranokalanareo ianareo? Raha eny, atao inona izy io?
V- Efa nanana ny seha-pifanakalozan-kevitra izahay, saingy nesorina vonjimaika izy io mandra-panavaozanay izany. Natao ho an'ny karazana adihevitra rehetra ny seha-pifanakalozan-kevitra.
F-Inona ireo horonantsary izay tsy azo ekena ao amin'ny tranokalanareo?
V- Ity dia olana sarotra ho anay tato ho ato. Manana olona avy amin'ny vondrona politika sasantsasany izahay izay manandrana mandefa lahatsary maromaro izay somary toy ny fampielezan-kevitra ho an'ny finoany. Nanapa-kevitra ny tsy hitazona ireo lahatsary ireo ao amin'ny tranokalanay izahay . Ny antony dia hoe tsy tianay ny FarsiTube ho toerana handefasana fampielezan-kevitra avy amin'ny andaniny roa. Maniry izany kosa izahay ho toerana ahafahanareo mahafantatra momba an'i Iran, ny kolontsaina Iraniana, ary ny zava-mitranga ao Iran, ary hanapa-kevitra ho an'ny tenanareo fa tsy ho voavelivelin'ny mahery fihetsika avy amin'ny andaniny roa. Tsy tianay ilay tranonkala ho feno resaka politika . Miezaka ihany koa izahay ny hitazona ireo lahatsary mifandraika amin'ny tombotsoa Iraniana, fa tsy hoe lasa YouTube hafa fotsiny ihany. Noho izany antony izany no handanjalanjana ny famoahana lahatsary .
F- Amin'ny maha-Amerikana-Iraniana anao, mihevitra ve ianao fa manana anjara amin'ny tetezana ara-kolontsaina mampifandray ny vondrom-piarahamonina roa ny FT?
V- Eny, raha ny marina, izany no iray amin'ireo zavatra tena niainako tao amin'ny FarsiTube. Tsapako fa mihahafa mihitsy amin'ireo tanora monina ao Iran ny zanak'ireo Iraniana teraka ao Iran, toy ny tenako. Mandritra izany fotoana izany, mazava ho azy fa manana ny mampitovy azy kokoa izy ireo. Heveriko fa afaka mampiseho ireo vondrom-piarahamonina roa ny FarsiTube ary manampy azy ireo hifandray bebe kokoa. Mbola manana lalana lavitra izahay hivoarana amin'io lafiny io, indrindra amin'ny alalan'ireo endri-javatra vaovao toy ny tolotra famahanana bilaogin-dahatsary izay kasainay hampiana amin'ny hoavy.
F- Manaraka ny bilaogy Iraniana ve ianao?
V- Nanaraka ny bilaogy Iraniana sasany sy ny seha-pifanakalozan-kevitra momba ny FarsiTube aho, ary nahitana ny fandraisana miabo izany tamin'ny ankapobeny. Nifandray tamin'ny tranonkala Iraniana am-polony izahay.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/13/131817/
 Farsi Tube: http://www.farsitube.com